WordPress: Ku dar Bar Fariin Sare | Martech Zone
Axad, Nofeembar, 27, 2011 Isniin, November 28, 2011 Douglas Karr
Iyada oo leh bogga cusub, waxaan raadinayay a baarka sare ee WordPress in muddo ah. Naqshadeena ugu dambeysay ee mowduuca waxay runtii laheyd qeyb dhan oo la soo jiidan karo oo xayaysiisa ku qor email. Tani waxay kordhisay tirada macaamiisha si aad u weyn oo aan ku biiriyey qaybta rukunka si toos ah cinwaanka mawduuca.
Hadda waxaan kaliya rabay a baarka sare si aan akhristayaasha ula socodsiino farriimaha muhiimka ah ee aan rabno inaan xusuusino about oo ay ku jiraan wararka iyo dhacdooyinka. Waxaan u waday inaan tan si toos ah ugu qoro dulucdeenna laakiin waa la helay WP-Topbar, Feejignaan sare oo si fiican u qoran oo loogu talagalay WordPress. Waxaa jiray qaar kale oo halkaa ka joogay oo leh astaamo kale… sida farriimaha wareegaya ama jadwalka farriinta, laakiin fudeydka qalabkan ayaa ka adkaaday iyaga.
Waan ka mahadceliyay in baarka sare aan lagu adkeynin xagga sare ee bogga waxa ku jira; taa bedelkeeda, waxaa si firfircoon loo soo saaray oo ka muuqda goobaha oo ay ku jiraan dib u dhac iyo xawaare lagu soo bandhigayo… taabasho aad u fiican! Waad xakameyn kartaa midabada (iyo xitaa sawirka asalka ah) ee baarka, farriinta, ku dar xiriir, iyo xitaa ku dheji CSS-gaaga. Maamulka sidoo kale wuxuu leeyahay horudhac sidaa darteed waxaad ku eegi kartaa dhammaan isbeddeladaada kahor intaanad toos u dhigin.
Xusuusnow, waxaa jira qaar ka mid ah baararka ugu sarreeya suuqa oo lacag ka qaadaya… laakiin waxaan u maleynayaa in kani ka qiimo badan yahay!
WARSIDAHA: Wax yar ayaan ka sameeyay cusbooneysiinta. Hadda waxay ka soo dejineysaa wp_footer halkii laga wp_head (taasi waa WordPress API hadal) iyo waxaan cusbooneysiiyay div si aan u yeesho aqoonsi iyo qaabeyn aan ku hagaajiyo baarka halkii aan qaraabo u yeelan lahaa. Sidan, baarku wuu sii jirayaa intaad bogga u rogeyso.
Tags: bar fariinfarriinta bar farriintaqalabkanbaarka sareplugin sare barplugin WordPresswordpress bar sarecagaha_ cagtawp_ madaxa
Nov 27, 2011 saacadu markay tahay 7:10 PM
Nov 27, 2011 saacadu markay tahay 7:40 PM
Waad sharadaysaa, George!
11, 2011 at 1: 18 AM
Fariinta farriinta sare ayaa runtii soo muuqata.
waad ku mahadsantahay qaybta!
11, 2011 at 1: 45 AM
Waxaan isku dayay isku xirkaaga laakiin kumbuyuutarka meesha kuma sii jiro. Xagee ka heli karaa Karr?
Sep 7, 2012 at 8: 51 AM
Waa maxay sababta tan aan aniga ii shaqeyneynin? Waxaan isku dayay qalabkan 6 bilood kahor mana aanan garan karin sida. Waxaa loo rakibay sifiican waana u maareeyay dejinta si sax ah waxaan u maleynayaa laakiin kuma soo muuqaneyso bogga guriga ama bogga id ee aan dhigay. Hadda waxay igu qaadatay in ka badan saacad inaan shaqeeyo. Waan ka dheregsanahay. Qof baa caawiya!
Ya Waxaan u dejiyay waqtiyada si sax ah sidoo kale. (in millisecods) iyo taariikhda sidoo kale. Maxaan hadda tebay?
Sep 7, 2012 at 9: 26 AM
Waxaa laga yaabaa in nooc ka mid ah khilaafyada leh qalab kale? Waxaad isku dayi kartaa inaad naafo ka dhigto dhammaan waxyaabaha aad ku shaqeyso oo aad u shaqeyso midkaas si aad u aragto waxa dhacaya.
Ya way shaqeysay kadib markay waxyaabo badan tijaabisay. Tani way hagaajisay - dib-u-dejintii ugu horreysay. Nooca hadda jira wuxuu u shaqeeyaa dhibaato la'aan
Nov 26, 2012 saacadu markay tahay 5:41 PM
Waad ku mahadsantahay qaybta, kaliya wixii aan raadinayay.
Oktoobar 21, 2013 at 5:08 PM
Waad ku mahadsantahay qoraalka weyn. Waxaan si sax ah u raadinayay tan. Si kastaba ha noqotee waxaan raadinayay "hello bar" badalkeed mana muuqato mid aniga ila shaqeynaya. Waad ku mahadsan tahay qoraalkan aragtida leh.